रुपन्देहीका विद्यालय आजदेखि बन्द, यातायातमा भोलिदेखि जोरविजोर प्रणाली - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ लुम्बिनी प्रदेश ∕ रुपन्देहीका विद्यालय आजदेखि बन्द, यातायातमा भोलिदेखि जोरविजोर प्रणाली
रुपन्देहीका विद्यालय आजदेखि बन्द, यातायातमा भोलिदेखि जोरविजोर प्रणाली
डी. आर. बन्जाडे सोमबार, २०७८ वैशाख १३ गते, १०:५५ मा प्रकाशित
बुटवल—कोरोना भाइरसको संक्रमण विद्यालयमा तीव्र रुपमा फैलिएको आशंकासहित रुपन्देही जिल्लाका सबै विद्यालयहरु सोमबारदेखि बन्द भएका छन् ।
जिल्लाका १६ वटै पालिकाहरुमा रहेका विद्यालयहरु बैशाख मसान्तसम्मका लागि भौतिक रुपमा बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बताए । जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँगको छलफलबाट विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको उनले बताए ।
यसअघि जिल्ला भित्र परीक्षा संचालन गरेका विद्यालयहरुले जनस्वास्थ्यका मापदण्डसहित सुचारु गर्न सक्ने भनिएको थियो । यद्यपि विद्यार्थीहरुमा संक्रमण बढ्न थालेपछि विद्यालय भौतिक रुपमा बन्द गरिएको छ । परीक्षा पनि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर संक्रामक देखिएको भन्दै रुपन्देहीमा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा समेत कडाइ गरिने भएको छ । त्यसका लागि मंगलबारदेखि जोर विजोर प्रणाली लागू हुनेछ । जिल्लाभित्र संचालनमा आउने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु हुने थापाले बताए । त्यस्तै, भिडभाड हुने हाटबजारहरु समेत बन्द भएका छन् ।
पछिल्लो बैठकले स्थानीय पालिकाहरुलाई आइसोलेसन तथा एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समयमा देखा परेको नयाँ भेरियन्टको भाइरस संक्रामक देखिएकोले सुरक्षाका उपाय तथा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालनामा जोड दिइएको छ । त्यसका लागि पालिकाहरुले जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गर्ने निर्णय भएको छ ।